Ireo boky tantara tsara indrindra
Boky telo voalohany an'i Paul Preston
Araka ny voalaza matetika eo amin'ny vazivazy sy ny tena izy, dia tokony hiseho amin'ny endrik'i Paul Preston eo akaikin'ny rakibolana ny dikany ny Hispanism. Satria, amin'ny maha mpahay tantara (ary marimarina kokoa amin'ny zotom-po bebe kokoa amin'ity lafiny mitentina Hispanika ity), ity mpanoratra anglisy ity dia nanadihady ary nanangona sy nanaparitaka ...
Ny trano mandrakizay, nataon'i Yuri Slezkine
Hiran'i Def miaraka amin'i Dos no nanontany tena tamin'ny fomba namaky hoe iza no nandika ny kabarin'i Lenin. Tsy maintsy nisy ny tompon'andraikitra tamin'io loza io izay ny fametrahana ny kaominista. Ary io dia eny, ankoatry ny parody mozika dia nisy zavatra tsy nety, diso tanteraka. Voalohany indrindra satria fantatro ...
M. Ilay lehilahy mpiahy, nataon'i Antonio Scurati
Mampiseho ny traikefa fa ny fitandremana dia antenaina amin'ny fotoana maizina indrindra eto an-tany. Toy ny oram-baratra mahery, alohan'ny handehanan'ny tselatra. Tsy misy tsara noho ny populism tsara afaka maneho ny tenany ho tompon-daka amin'ny ho avy tsara indrindra ka mifarana ity finoana hafahafa ity ...
Boky Henry Kamen 3 tsara indrindra
Misy andro hafahafa hiasa amin'ny maha Hispanikista malaza azy. Ary na eo aza izany, ny tovolahy toa an'i Paul Preston, Ian Gibson na Henry Kamen dia manizingizina ny hanohy hifantoka amin'ny tantara iray, raha toa ka noho ny finiavana hafa mifantoka amin'ny lainga, angano mainty na liana ara-poko dia hiafara amin'ny fikorontanana tanteraka. ...
Ny fakana fanahy ny Caudillo, nataon'i Juan Eslava Galán
Zigzagging eo anelanelan'ny tantara ara-tantara lehibe sy ny asa fanaovan-baovao, Juan Eslava Galán dia manentana hatrany ny mpamaky, ny fahalianan'ny mpanoratra dia zatra amin'ny bibliôgrafia toa izay mamiratra. Amin'ity fotoana ity dia mampanakaiky antsika amin'ny sary malaza i Eslava Galán. Ilay iray miaraka amin'ireo mpanao didy jadona roa mandeha ...
Notre Dame, nataon'i Ken Follett
Angamba ity boky ity dia iray amin'ireo tsara kely azo raisina amin'ny iray amin'ireo lozam-pifamoivoizana nitranga tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ken Follett dia nanilika izay rehetra nataony mba hanomezana antsika boky nosoratana avy amin'ny fahatsapana fatiantoka lehibe. Satria mihoatra ny ...
Feon'i Chernobyl, nataon'i Svetlana Aleksievich
Ny voatonona anarana dia 10 taona tamin'ny 26 aprily 1986. Ilay daty nampalahelo nanatonan'izao tontolo izao ny loza nokleary azo antoka. Ary ny mahatsikaiky dia tsy ny baomba nandrahona ny handevona izao tontolo izao amin'ny Ady mangatsiaka izay nitohy ...
Ny vanim-potoana maizina, nataon'i Catherine Nixey
Ary rehefa maty teo amin'ny hazofijaliana Jesosy dia nivadika ho alina ny andro. Angano sa fanakona-masoandro? noho ny famoahana ilay raharaha ho lasa vazivazy. Ny tiana hambara dia ny tsy mety hisy fanoharana tsara kokoa handinihana fa ny fahaterahan'ny Kristianisma, teo am-pototry ny lakroa, dia nahazo io feo maizina io ihany ...